Apple Inowedzera Dzazvino iPod Nano kuRondedzero yeVintage Devices | IPhone nhau
Icho chave chiri chimwe chemidziyo inosarudzwa nevazhinji vashandisi veApple, chishandiso chakagadzira nhoroondo uye chakaratidza kutanga kwezvaizouya gare gare: iyo iPod. Mamirioni enziyo mune diki tekinoroji chishandiso icho, kusiyana nevamwe vatambi, chakavakirwa mashandiro ayo pane kureruka. Dzimwe iPod dzaive neshanduro dzinoverengeka, kubva kuClassic, kuenda kuTouch (inotangira iyo iPhone), kuburikidza neShuffle, kana iyo Nano. Uye chaizvo iyo nhau yatinokuunzira nhasi inoenderana ne Ipod nano. Uye ndeyekuti Apple ingadai yarega, vakaimaka sevintage (nhanho isati yapera), iyo yazvino iPod Nano. Mushure mekusvetuka tinokuudza zvese zvine chekuita neichi chishamiso chishandiso.
Chenjera, kuti chigadzirwa chevintage hazvireve kuti isu tinofanirwa kuchirasa nekuti hachichashande, pane kudaro ... Kuimaka sevintage, chimwe chinhu chinotaridzika nekuti mudziyo uyu unobva muna 2015, Apple inomira kutsigira izvi iPod Mukuru mukoma. Iwe une dambudziko here neako iPod Nano? Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekutsvaga pakati pezviuru zvezvidzidzo zvaunogona kuwana paYouTube kuzvigadzirisa. Izvo zvaive zvichitarisirwa kubvira runyorwa rwe vintage zvishandiso, dzimba zvishandiso zvakamiswa kweanopfuura makore mashanu uye asingasviki manomweKana vakapfuura makore manomwe, vanova zvishandiso zvisingachashandi, sezvichaitika neiyi iPod Nano munguva pfupi.
Sezvatinotaura, Apple yakaburitsa iyi yazvino iPod Nano muna 2015 ichiwedzera mavara matsva asi ichichengeta dhizaini yekare. Yakamiswa muna 2017, panguva iyo iyo iPod Touch yakava yega iPod yekutengesa, chishandiso chakafanana chaizvo neiyo iPhone, hongu, isina kubatana kwenhare. Uye iwe, unoshandisa chero yako maPods nhasi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » iPod » Apple inowedzera yazvino iPod Nano kune vintage mudziyo runyorwa
Chekutanga tirera yeiyo nyowani Snoopy dzakateedzana dzave kuwanikwa